Fanendahana mifanesy eny 67ha Lehilahy iray sy vehivavy bevohoka nadoboka am-ponja
Noho ny harom-paosy vola roa alina ariary, vehivavy bevohoka iray no voasambotry ny polisy ny talata 4 jona teo.
Tamin’ny 10 ora maraina no voasambotra ilay vehivavy rehefa nangarona ny vola tao am-paosina vehivavy nandalo teo amin’ny ny Paositra 67ha. Polisy avy ao amin’ny Kaomisaria 67ha, izay nijoro teny am-pita no nahita azy nijokojoko ka nisambotra raha iny saika hitsoaka iny nony nahazo ilay vola. Tratra teny an-tanany ilay vola 20.000 Ariary, ka efa tafaverina tamin’ny tompony. Tamin’ny 4 ora tolakandro koa no voasambotra teo amin’ny manodidina ny Mada Hotel 67ha ny lehilahy 1 hafa. Roa lahy izy ireo no niara-nanao ity asa ratsy ity fa tafaporitsaka ny iray. Vehivavy iray no lasibatr’izy ireo. Niantso vonjy avy hatrany ity farany ka polisy nanao fanamiana sivily no nisambotra azy ireo.